Tanjona, azafady mihidy ny akanjon'ny akoho | Martech Zone
Hafatra misokatra ho an'ny Target:
Azafady aza avela hisokatra mandritra ny Halloween ny akanjon'ny akohoo.
Azafady, aza avela eo amin'ny lalantsara ny akanjon'ny akohoo, azon'ny olona anaovana azy tsy ho voamariky ny olona.
Azafady, aza avela ny akanjon'akoho ahafahan'ny ankizy 17 taona mifehy azy.
Azafady aza avela ny akanjon'akoho izay ahafahan'ny raim-pianakaviana miloka amin'ny zanany lahy 17 taona $ 5 hametahana ilay akanjo akoho ary haka am-pofoana ny Super Target manontolo…
faly ny ankizy kely miantsoantso hoe: “Neny… jereo… Lehilahy akoho!”.
Azafady, apetraho ny akanjon'ny akoho. Raha tsy te-hihomehy mafy ny raim-pianakaviana 17 taona ianao dia ho faty amin'ny aretim-po satria ny zanany lahy mametaka ny sandrin'ny Chicken Suit ary mihazakazaka eo alohan'ny fivarotana.
Tanjona, azafady mba hidio ny akanjon'ny akoho.
Dolara an'arivony tapitrisa ho an'ny Youtube? Angamba.
2 Okt 2006 amin'ny 8:36 PM
Angamba izy nanao akoho tsara kokoa noho ilay bandy mijoro ivelan'ny carpark ao an-tanàna isa-maraina mizara takelaka. Yup - miakanjo akanjo akoho.
Noana Aho …
Oct 3, 2006 amin'ny 9: 31 AM
Mahatalanjona izany. Tsy maintsy misy horonan-tsary momba an'io?!?!?! Azafady Bill, lazao fa afaka naka horonan-tsary momba an'io ianao?!?!?
3 Okt 2006 amin'ny 4:52 PM
Ianao ve dia ray iray feno fito ambin'ny folo taona manao akanjo akoho izay nampihomehy ny ankizy tamin-kafaliana, Douglas? Tsara kokoa noho i Dadabe Noely izany!
3 Okt 2006 amin'ny 10:59 PM
Eny, izaho no ray. Zanako lahy io, Bill.
4 Okt 2006 amin'ny 2:02 PM
Nahafinaritra ahy ny nahita an'io. Ny zanako lahy lahy antitra indrindra dia tsy ho niatrika palitao akoho, fa tsy izy roa lahy.